Ahoana ny fampifandraisana ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP [Tutorial] | Androidsis
Ahoana ny fampifandraisana ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP
Ny iray amin'ireo zavatra tsy afaka ataontsika ho fenitra amin'ny rafitra fiasa Linux Ubuntu dia ny mampifandray ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP.
Amin'ity lesona azo ampiharina manaraka ity dia hanazava tsikelikely ny fomba ananantsika ny mpampiasa Ubuntu na ny rafitra fiasa Linux any Debian, ho an'ny mampifandray ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fametrahana ny terminal Android antsika, alefaso ny fifandraisana MTP izay amin'ny ankapobeny dia matetika ao Fikirana / fifandraisana PC / Safidio ny fomba fifandraisana USB. Hiankina amin'ny marika an'ny Android-nao sy ny sosona fanaingoana azy io.
Raha vantany vao vita io dia afaka atao isika, tsy mampifandray ilay fitaovana amin'ny solo-saintsika manokana, manokatra terminal vaovao ary araho ny torolalana izay omeko antsipirihany etsy ambany:
Ny voalohany indrindra dia ampio ny tahiry vaovao hampiasainay amin'ny fanoratana an'ity tsipika komandy ity:
sudo add-apt-repository ppa: webupd8team / tsy milamina
Tsindrio eo Midira hanaiky ny fampidirana ny tahiry vaovao ary avy eo havaozy ny lisitry ny fonosana miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ankehitriny dia tsy mila mametraka ny rindranasa izay hanampy antsika fotsiny isika mampifandray ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP:
sudo apt-mahazo mametraka go-mtpfs
Ary farany mila mila manampy mpandefa launcher vaovao ao amin'ny biraovana. Unity mba hanamorana izany ho antsika Fifandraisana Android sy Ubuntu mampiasa MTP:
sudo apt-mahazo mametraka go-mtpfs-firaisankina
ny app launcher toy ity sary manaraka ity:
Raha tsy miseho izany dia mankany dash, manoratra izahay MTP ary amin'ny fanintomana fotsiny ilay kisary mankany amin'ny Bara miray avelantsika hipaingotra izy io raha ampiasaina haingana ny programa.
Para mampifandray ny terminal anay amin'ny alàlan'ny MTP, ho ampy ihany ny manana ny safidy ampandehanana avy amin'ny fikirakirana Android ary mampifandray azy amin'ny alàlan'ny tariby USB mankany aminay Ubuntu PC. Avy eo tsindrio ny kisary bara Unity, miaraka amin'ny bokotra havanana totozy dia mifidy ny safidy isika Fitaovana Android Mount hametahana ilay fitaovana, na Atsipazo ny fitaovana Android esory tsara ilay app amin'ny app.
Amin'ity fampianarana tsotra ity dia ho azonao mampifandray ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP hanakalo rakitra sy lahatahiry amin'ny fisintomana fotsiny avy eo amina varavarankely iray mankany amin'ny iray hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fampifandraisana ny Android amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana MTP
mtornos Manuel Tornos dia hoy izy:
Tsy fantatro izay kinovan'ny Ubuntu izay "miasa" miaraka aminao fa ny 3 farany mampifandray MTP (sy ny fiara mivantana, toy ny amin'ny android taloha) mivantana nefa tsy mikasika na inona na inona: 14.04 LTS (ny soso-kevitra indrindra), 13.10 sy 13.04.
Mamaly an'i mtornosManuel Tornos
Miaraka amiko miaraka amin'ny 14.04 sy bq E 4.5 ny fahatsiarovana ny finday hiseho fa tsy hitako ny karatra fahatsiarovana.
Kisha dia hoy izy:
Salama! Milaza amiko izy fa tsy hita ilay fonosana go-mtpfs. Vaovao tanteraka amin'ny Linux aho. Misy sosokevitra ve?
Valio amin'i Kisha
Mito dia hoy izy:
Nanampy be dia be ahy izany, misaotra betsaka, tena ilaina sy tsotra izy io
Mamaly ny angano
Ho ahy koa.
Vikings dia hoy izy:
Valiny tamin'i Viking
Fanofana dia hoy izy:
Mamaly ny fanofana
Samsung sensor biometric ho an'ny antonony sy ambany dia ho avy tsy ho ela